नेपालको बिजुली भारतले बंगलादेशमा बेच्न देला त ? - Maxon Khabar
Home / News / नेपालको बिजुली भारतले बंगलादेशमा बेच्न देला त ?
नेपालको बिजुली भारतले बंगलादेशमा बेच्न देला त ?
काठमाडौं ९ असार
हामी सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो नेपालमा जलस्रोतको धनी देश हो ।जहा हाईड्रो पावरका प्रचुर सम्भावना हरु छन । नेपालमा उत्पादित बिजुली किनेर बंगलादेश आफ्नो अभाव टार्ने योजनामा छ । यसका लागि नेपालका जलविद्युत आयोजनाहरुमा लगानी गर्न पनि बंगलादेश इच्छुक छ ।
बंगलादेश र नेपालबीच विद्युत ब्यापार सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भइसकेको छ । दुई देशको ऊर्जा मन्त्रालयबीच हालै बंगलादेशको लगानीमा नेपालमा जलविद्युत आयोजना बनाउने तथा नेपाल र बंगलादेशबीच प्रसारण लाइन निर्माण गरेर विद्युत ब्यापार गर्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । यो त्यति सरल छैन किनकि, नेपाल र बंगलादेशको बीचमा भारत छ। बंगलादेश र नेपालबीच हुने विद्युत ब्यापारको सहमति भारतले चाहेमा मात्रै कार्यान्वयन हुन सक्छ
बंगलादेशले नेपालमा उत्पादित बिजुली लैजान भारतको बाटो हुँदै भारतकै पूर्वाधारको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा संयन्त्रको बैठकमा नेपालले दुई देश जोड्ने प्रसारण लाइन तयार नहुदा सम्म भारतको पूर्वाधार प्रयोग गरेर बिजुली ब्यापार वातावरण तयार गर्ने नेपालले आश्वासन दिएपछि बंगलादेश भारतीय पूर्वाधारको प्रयोग गरेर विद्युत खरीद गर्न सहमत भएको छ । अब यो सहमति कार्यान्वयन गर्न भारतलाई दुबै देशले मनाउनुपर्ने हुन्छ ।
विभिन्न तहमा हुने छलफल, संवाद, कुटनीतिक पहल, क्षेत्रीय तहमा भएका सहमति, सम्झौता, समझदारीहरुका आधारमा यस्तो विषयलाई सहजरुपमा टुंगो लगाउन सकिने ऊर्जा मन्त्रालयको विश्वास छ ।
उर्जा मन्त्रालयका अधिकारीहरु भारत पछिल्लो समय नेपालमा उत्पादित ऊर्जा खरिद गर्ने र व्यापारका लागि अन्य मुलकुसम्म पुग्ने विद्युत मार्ग दिन लचिलो बन्दै गएको बताउँछन् ।
घिमिरेले भने, ‘त्रिदेशीय विषय भएकाले तीनै देशको नीति–नियम र कानून हेर्नुपर्छ । हामीले सम्भावित जोखिम हेरेर योजनमा नर्छिने भन्ने हुँदैन ।’
भारतलाई पनि पिकिङ आवरमा बिजुली चाहिएको छ, त्यो पूर्ति गर्ने जलविद्युतले नै हो, ग्लोबलाइजेसनको सन्दर्भ छ, ओपन मार्केटको कुरा छ, यस्तोमा भारतले समर्थन गर्दै गर्दैन भन्नेमा हामी जानु हुन्न । ऊर्जासचिव घिमिरेले भने।
निर्देशिका सच्यायो भारतले :
आफ्ना लगानीमा बनेका आयोजनाका मात्रै बिजुली किन्ने गरी निर्देशिका भारतले ल्याएको थियो । यसै कारण तेस्रो मुलुकका कम्पनीहरुको लगानीमा उत्पादित बिजुली सिधै भारतीय बजारमा बेच्न सकिने अवस्था थिएन ।
तर, गत डिसेम्बर १८ मा आफ्नो क्रसबोर्डर विद्युत् व्यापार (आयात–निर्यात) निर्देशिका भारतले संशोधन गर्‍यो । यसले नेपाललाई भारत र तेस्रो मुलुकमा विजुली ब्यापारको बाटो खोलेको अधिकारीहरु बताउँछन् ।